အရောင်တွေကနေတစ်ဆင့် လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကို ခန့်မှန်းကြမယ် – Trend.com.mm
လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို သူတို့အကြိုက်ဆုံးအရောင်ကနေတစ်ဆင့် ခန့်မှန်းရတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ၊သင်အနှစ်သက်ဆုံးအရောင်ကရော ဘာအရောင်ပါလဲ? သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရောင်ကနေ သင့်ရဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။ တစ်ခြားလူတစ်ယောက်ကိုလည်း သူအကြိုက်ဆုံး အရောင်ကနေတစ်ဆင့် သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထား ကိုယေဘူယျအားဖြင့်ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ကဲ ဒါဖြင့် ဟုတ်မဟုတ်စမ်းကြည့်လိုက်ရအောင်။
အပြာရောင်က ယောက်ျားလေးတွေအများစုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရောင်တစ်ခုဖြစ်သလို ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးခွဲခြားထားတဲ့အရောင်လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ဥပမာ မိန်းကလေးအများစုက ပန်းရောင်ကြိုက်တာ၊ယောက်ျားလေးတွေက အပြာရောင် ကြိုက်တာပေါ့။အပြာရောင်မှာ တခြားအဓိပ္ပာယ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ သင်အကြိုက်ဆုံးအရောင်က အပြာရောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သင်က စိတ်တည်ငြိမ်တယ် ၊အားကိုးရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။တခြားသူတွေကသင့်အပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချမှု အပြည့်ထားရှိနိုင်လောက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး တခြားသူတွေကိုလည်း အေးအေးဆေးဆေးစိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်အောင်ပြောပြပေးနိုင်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲ အပြာရောင်ကြိုက်သူတစ်ချို့ဟာ အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်မှာသာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပြီးသန်မာပုံပေါ်ပေမဲ့ အတွင်းစိတ်မှာတေ့ာသင်က ထိခိုက်နာကျင်လွယ်တဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သင်ကြိုးစားသမျှအရာထင်စေဖို့အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နေရတဲ့သူ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြနေပါသေးတယ်။
အညိုရောင်ကတော့ထူးခြားတဲ့အရောင်တစ်ခုပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုရင် အကြိုက်ဆုံးအရောင်က အညိုရောင်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတဲ့သူ ရှားပါးပါတယ်တဲ့။တကယ်လို့များအညိုရောင်က သင်အကြိုက်ဆုံးအရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် သင်ကသွေးအေးတယ်၊အရမ်းတည်ငြိမ်တယ်၊ တကယ်လို့ အငြင်းပွားမှု တစ်ခုကြုံရင်တောင်သင်က ကြိုတင်မပြင်ဆင်ပဲ အငြင်းပွားမှုထဲ ကိုဝင်မယ့်သူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။တစ်ခြားကိုယ်ရည်သွေးအရည်အချင်းတွေကတော့ သင်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှိမ့်ချတတ်သလိုအရှက်အကြောက်လည်းကြီးတယ်။သစ္စာရှိတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် သင်က လွတ်လပ်စွာနေတတ်ပြီး သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးက သေးငယ်ရင်တောင် အကောင်းဆုံးကြိုးစားလေ့ရှိတယ်။
အနီရောင်ကတော သွေးနဲ့အန္တရာယ်ကြီးတဲ့အရောင်လို့ပြောကြပါတယ်။သင့်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအရောင်က အနီရောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သင်ကမတွေဝေ မတွန့်ဆုတ်တတ် ဘူး၊အကြောက်အလန့်မရှိဘူး။ဘယ်အရာမဆိုသင့်စိတ်ကြိုက်လုပ်လေ့ရှိတယ်။သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစွန့်စားချင်စိတ်တွေအပြည့်ဖြစ်နေပြီး စွန့်စားခန်းခရီးတွေလည်း အမြဲတမ်းထွက်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ဒေါသထွက်လွယ်ပြီး အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။
သင့်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအရောင်က အ၀ါရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် သင်က အသစ်အဆန်းပညာရပ်တွေကို လေ့လာရတာပျော်ရွှင်တယ်။ကမ္ဘာကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေသမျှကိုလည်း စူးစမ်းချင် စိတ်တွေရှိတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထူးချွန်သူတွေဖြစ်ကြတယ်။ သဘာဝတရားကြီး
နဲ့ပတ်သက်လို့ အကောင်းမြင်စိတ်တွေရှိပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ့်ကိုယ်တော့ အကောင်းမြင်စိတ်တွေ အမြဲတမ်းမထားနိုင်ကြပါဘူး။သူတို့က သူတို့ရဲ့ ဘ၀ပိုပြီးကောင်းအောင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကလည်းသိတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်။
သင့်ရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံးအရောင်က ခရမ်းရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ စိတ်က အနုပညာတစ်ခု လိုပါပဲတဲ့။သင့်စိတ်ထဲကဖြစ်လာတဲ့အတိုင်း၊လုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းပုံဖော်ပြီး ဘ၀ကိုရှင်သန်နေထိုင် ကြတယ်။အာရုံစူးစိုက်မှုလည်းကောင်းမွန်ပြီးအမှီအခိုကင်းတဲ့လူတွေဖြစ်ကြတယ်။တခြားသူတွေအပေါ်မှာ လွယ်လွယ်နဲ့မှီခိုလေ့မရှိပဲ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် စိတ်ကြိုက်ရှင်သန်ကြတဲသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
လူအများစုက အစိမ်းရောင်ကိုနှစ်သက်လေ့ရှိကြပါတယ်။အစိမ်းရောင်က စစ်မှန်တဲ့သူငယ်ချင်း လို့တောင်ရည်ညွှန်းကြတယ်။အစိမ်းရောင်ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေက သူတို့ရဲ့အတွေးတွေ၊ အပြုအမူတွေ၊အကျင့်စရိုက်တွေက ကောင်းမွန်ပြီးသူငယ်ချင်း၊မိတ်ဆွေ၊မိသားစုအပေါ်မှာလည်း သစ္စာရှိကြတယ်။အစိမ်းရောင်ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေနဲ့ရင်းနှီးရင် သူတို့က သင့်ကိုစိတ်ပျက်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကိုလည်း
ကူညီဖြေရှင်းပေးကြပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ထောင်ကျလို့ သားသမီးတွေရှိလာရင်လည်းတခြားသူတွေကို ဂရုစိုက်ပေးနေရင်းကို သူတို့ရဲ့ ကလေးတွေဘ၀ကိုမြှင့်တင်ပေးကြတဲ့သူတွေပါ။အစိမ်းရောင်ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေရဲ့ ဘ၀က
များသောအားဖြင့် ပူပန်ကြောင့်ကြမှုမရှိပဲ အေးဆေးတည်ငြိမ်ကြပါတယ်။
ပန်းရောင်မကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးရယ်လို့မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရသလိုပန်းရောင်ကြိုက်တဲ့ယောက်ျားလေး ကတော့ ရှားပါတယ်။ပန်းရောင်ကြိုက်တဲ့သူတွေဟာအရမ်းလည်းချစ်တတ် ကြင်နာတတ်ပြီး နှလုံးသားကလည်းနူးညံ့ပါတယ်။စိတ်ခံစားလွယ်သူတွေလည်းဖြစ်ပြီး တစ်ခြားသူတွေကိုလည်း အသေးအဖွဲလေးကအစဂရုစိုက်ပေးတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်ပန်းရောင်ချစ်သူတွေက ရဖို့ထက် ပေးဖို့ကိုပဲ ပိုပြီးစိတ်ဆန္ဒရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့ တာဝန်က တစ်ခြားသူတွေ ဘ၀မှာပျော်ရွှင်ဖို့လုပ်ပေးရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားသလိုပါပဲ။သူတို့က ချိုသာတယ် ၊ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လည်းနေတတ်ပြီး ဘယ်သူနဲ့မဆိုချစ်ခင်ရင်းနှီးလွယ်ပါတယ်။လူတိုင်းကလည်း သူတို့အပေါ်ကိုချစ်ကြပါတယ်။
အမည်းရောင်က ၁၉ရာစုမတိုင်ခင်အထိ ရှားရှားပါးပါးမြင်တွေ့ရတဲ့အရောင်ပါပဲ။အမည်းရောင်က သင့်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအရောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သင်က ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာစွာချတတ်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သင်က အစွမ်းအစတွေအပြည့်ရဖို့ ထိပ်ဆုံးထိရောက်အောင်တက်ချင်သူဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်အတိုင်းအောင်မြင် အောင်ကြိုးစားတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။သင်က သင့်ကိုဘယ်အရာကအောင်မြင်စေမလဲဆိုတာ
သေချာသိထားတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။အမည်းရောင်ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေက တစ်ခြားသူတွေနဲ့ရောရောနှောနှောနေလေ့မရှိပေမဲ့ခင်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ်။ အမည်းရောင်ကြိုက်သူတွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်က အမြင့်ဆုံးမှာပဲရှိတတ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေအပေါ်မှာလည်းလွှမ်းမိုးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
လူတဈယောကျရဲ့ စိတျနစေိတျထားကို သူတို့အကွိုကျဆုံးအရောငျကနတေဈဆငျ့ ခနျ့မှနျးရတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ၊သငျအနှဈသကျဆုံးအရောငျကရော ဘာအရောငျပါလဲ? သငျရှေးခယျြလိုကျတဲ့အရောငျကနေ သငျ့ရဲ့ အကွောငျးကို ပွောပွပေးနိုငျပါတယျ တဲ့။တဈခွားလူတဈယောကျကိုလညျး သူအကွိုကျဆုံး အရောငျကနတေဈဆငျ့ သူ့ရဲ့စိတျနစေိတျထားကိုယဘေူယအြားဖွငျ့ခနျ့မှနျးနိုငျပါတယျ။ကဲ ဒါဖွငျ့ ဟုတျမဟုတျစမျးကွညျ့လိုကျရအောငျ။
အပွာရောငျက ယောကျြားလေးတှအေမြားစုကွိုကျနှဈသကျတဲ့အရောငျတဈခုဖွဈသလို ယောကျြားလေးနဲ့မိနျးကလေးခှဲခွားထားတဲ့အရောငျလညျးဖွဈပါသေးတယျ။ဥပမာ မိနျးကလေးအမြားစုက ပနျးရောငျကွိုကျတာ၊ယောကျြားလေးတှကေ အပွာရောငျ ကွိုကျတာပေါ့။အပွာရောငျမှာ တခွားအဓိပ်ပာယျတှလေညျးရှိပါသေးတယျ။ သငျအကွိုကျဆုံးအရောငျက အပွာရောငျဖွဈမယျဆိုရငျ သငျက စိတျတညျငွိမျတယျ ၊အားကိုးရတဲ့သူတဈယောကျဖွဈတယျ။တခွားသူတှကေသငျ့အပျေါယုံကွညျစိတျခမြှု အပွညျ့ထားရှိနိုငျလောကျတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပွီး တခွားသူတှကေိုလညျး အေးအေးဆေးဆေးစိတျတညျငွိမျမှုဖွဈအောငျပွောပွပေးနိုငျသူတှဖွေဈတယျလို့ပွောလို့ရပါတယျ။အဲ့ဒီလိုပဲ အပွာရောငျကွိုကျသူတဈခြို့ဟာ အပျေါယံမကျြနှာပွငျမှာသာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုအပွညျ့ရှိပွီးသနျမာပုံပျေါပမေဲ့ အတှငျးစိတျမှာတေ့ာသငျက ထိခိုကျနာကငျြလှယျတဲ့သူ တဈယောကျဖွဈပွီး သငျကွိုးစားသမြှအရာထငျစဖေို့အကောငျးဆုံးလုပျဆောငျနရေတဲ့သူ တဈယောကျလညျးဖွဈတယျလို့ဖျောပွနပေါသေးတယျ။
အညိုရောငျကတော့ထူးခွားတဲ့အရောငျတဈခုပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုရငျ အကွိုကျဆုံးအရောငျက အညိုရောငျဖွဈတယျလို့ဝနျခံတဲ့သူ ရှားပါးပါတယျတဲ့။တကယျလို့မြားအညိုရောငျက သငျအကွိုကျဆုံးအရောငျဖွဈတယျဆိုရငျ သငျကသှေးအေးတယျ၊အရမျးတညျငွိမျတယျ၊ တကယျလို့ အငွငျးပှားမှု တဈျခုကွုံရငျတောငျသငျက ကွိုတငျမပွငျဆငျပဲ အငွငျးပှားမှုထဲ ကိုဝငျမယျ့သူတဈယောကျမဟုတျပါဘူး။တဈခွားကိုယျရညျသှေးအရညျအခငျြးတှကေတော့ သငျက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျနှိမျ့ခတြတျသလိုအရှကျအကွောကျလညျးကွီးတယျ။သစ်စာရှိတဲ့သူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ဒါ့အပွငျ သငျက လှတျလပျစှာနတေတျပွီး သငျ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးက သေးငယျရငျတောငျ အကောငျးဆုံးကွိုးစားလရှေိ့တယျ။
အနီရောငျကတော သှေးနဲ့အန်တရာယျကွီးတဲ့အရောငျလို့ပွောကွပါတယျ။သငျ့ရဲ့ အကွိုကျဆုံးအရောငျက အနီရောငျဖွဈမယျဆိုရငျ သငျကမတှဝေေ မတှနျ့ဆုတျတတျ ဘူး၊အကွောကျအလနျ့မရှိဘူး။ဘယျအရာမဆိုသငျ့စိတျကွိုကျလုပျလရှေိ့တယျ။သငျ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာစှနျ့စားခငျြစိတျတှအေပွညျ့ဖွဈနပွေီး စှနျ့စားခနျးခရီးတှလေညျး အမွဲတမျးထှကျခငျြတဲ့ဆန်ဒတှရှေိနတေတျပါတယျ။ဒေါသထှကျလှယျပွီး အခှငျ့အလမျးအသဈတှကေိုအမွဲတမျးရှာဖှနေတေတျသူတဈယောကျပါ။
သငျ့ရဲ့ အကွိုကျဆုံးအရောငျက အဝါရောငျဖွဈတယျဆိုရငျ သငျက အသဈအဆနျးပညာရပျတှကေို လလေ့ာရတာပြျောရှငျတယျ။ကမ်ဘာကွီးမှာဖွဈပကျြနသေမြှကိုလညျး စူးစမျးခငျြ စိတျတှရှေိတယျ။ ယဘေူယအြားဖွငျ့ ပညာရေးနဲ့ပတျသကျပွီး ထူးခြှနျသူတှဖွေဈကွတယျ။ သဘာဝတရားကွီး
နဲ့ပတျသကျလို့ အကောငျးမွငျစိတျတှရှေိပမေဲ့ကိုယျကိုယျ့ကိုယျတော့ အကောငျးမွငျစိတျတှေ အမွဲတမျးမထားနိုငျကွပါဘူး။သူတို့က သူတို့ရဲ့ ဘဝပိုပွီးကောငျးအောငျ ဘာတှလေုပျရမလဲဆိုတာကလညျးသိတဲ့သူတှဖွေဈကွတယျ။
သငျ့ရဲ့ အနှဈသကျဆုံးအရောငျက ခရမျးရောငျဖွဈတယျဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ စိတျက အနုပညာတဈခု လိုပါပဲတဲ့။သငျ့စိတျထဲကဖွဈလာတဲ့အတိုငျး၊လုပျခငျြတဲ့အတိုငျးပုံဖျောပွီး ဘဝကိုရှငျသနျနထေိုငျ ကွတယျ။အာရုံစူးစိုကျမှုလညျးကောငျးမှနျပွီးအမှီအခိုကငျးတဲ့လူတှဖွေဈကွတယျ။တခွားသူတှအေပျေါမှာ လှယျလှယျနဲ့မှီခိုလမေ့ရှိပဲ ကိုယျ့ဘဝကိုယျ စိတျကွိုကျရှငျသနျကွတဲသူတှဖွေဈပါတယျ။
လူအမြားစုက အစိမျးရောငျကိုနှဈသကျလရှေိ့ကွပါတယျ။အစိမျးရောငျက စဈမှနျတဲ့သူငယျခငျြး လို့တောငျရညျညှနျးကွတယျ။အစိမျးရောငျကွိုကျနှဈသကျသူတှကေ သူတို့ရဲ့အတှေးတှေ၊ အပွုအမူတှေ၊အကငျြ့စရိုကျတှကေ ကောငျးမှနျပွီးသူငယျခငျြး၊မိတျဆှေ၊မိသားစုအပျေါမှာလညျး သစ်စာရှိကွတယျ။အစိမျးရောငျကွိုကျနှဈသကျသူတှနေဲ့ရငျးနှီးရငျ သူတို့က သငျ့ကိုစိတျပကျြစမှော မဟုတျပါဘူး။ရငျးနှီးတဲ့သူတှကွေုံတှနေ့ရေတဲ့ အခကျအခဲတှကေိုလညျး
ကူညီဖွရှေငျးပေးကွပွီးပတျဝနျးကငျြကလူတှနေဲ့ဆကျဆံရေးကောငျးမှနျကွတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။အိမျထောငျကလြို့ သားသမီးတှရှေိလာရငျလညျးတခွားသူတှကေို ဂရုစိုကျပေးနရေငျးကို သူတို့ရဲ့ ကလေးတှဘေဝကိုမွှငျ့တငျပေးကွတဲ့သူတှပေါ။အစိမျးရောငျကွိုကျနှဈသကျသူတှရေဲ့ ဘဝက
မြားသောအားဖွငျ့ ပူပနျကွောငျ့ကွမှုမရှိပဲ အေးဆေးတညျငွိမျကွပါတယျ။
ပနျးရောငျမကွိုကျတဲ့မိနျးကလေးရယျလို့မရှိဘူးလို့ပွောလို့ရသလိုပနျးရောငျကွိုကျတဲ့ယောကျြားလေး ကတော့ ရှားပါတယျ။ပနျးရောငျကွိုကျတဲ့သူတှဟောအရမျးလညျးခဈြတတျ ကွငျနာတတျပွီး နှလုံးသားကလညျးနူးညံ့ပါတယျ။စိတျခံစားလှယျသူတှလေညျးဖွဈပွီး တဈခွားသူတှကေိုလညျး အသေးအဖှဲလေးကအစဂရုစိုကျပေးတတျသူတှဖွေဈပါတယျ။မြားသောအားဖွငျ့ပနျးရောငျခဈြသူတှကေ ရဖို့ထကျ ပေးဖို့ကိုပဲ ပိုပွီးစိတျဆန်ဒရှိပါတယျ။သူတို့ရဲ့ တာဝနျက တဈခွားသူတှေ ဘဝမှာပြျောရှငျဖို့လုပျပေးရမယျလို့သတျမှတျထားသလိုပါပဲ။သူတို့က ခြိုသာတယျ ၊ပြျောပြျောရှငျရှငျလညျးနတေတျပွီး ဘယျသူနဲ့မဆိုခဈြခငျရငျးနှီးလှယျပါတယျ။လူတိုငျးကလညျး သူတို့အပျေါကိုခဈြကွပါတယျ။
အမညျးရောငျက ၁၉ရာစုမတိုငျခငျအထိ ရှားရှားပါးပါးမွငျတှရေ့တဲ့အရောငျပါပဲ။အမညျးရောငျက သငျ့ရဲ့ အကွိုကျဆုံးအရောငျဖွဈမယျဆိုရငျသငျက ဆုံးဖွတျခကျြခိုငျမာစှာခတြတျပွီး စိတျဓာတျကွံ့ခိုငျတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။သငျက အစှမျးအစတှအေပွညျ့ရဖို့ ထိပျဆုံးထိရောကျအောငျတကျခငျြသူဖွဈပွီး သငျ့ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြအတိုငျးအောငျမွငျ အောငျကွိုးစားတတျသူဖွဈပါတယျ။သငျက သငျ့ကိုဘယျအရာကအောငျမွငျစမေလဲဆိုတာ
သခြောသိထားတဲ့သူတဈယောကျလညျးဖွဈပါသေးတယျ။အမညျးရောငျကွိုကျနှဈသကျသူတှကေ တဈခွားသူတှနေဲ့ရောရောနှောနှောနလေမေ့ရှိပမေဲ့ခငျဖို့တော့ကောငျးပါတယျ။ အမညျးရောငျကွိုကျသူတှရေဲ့ ရညျမှနျးခကျြက အမွငျ့ဆုံးမှာပဲရှိတတျပွီး သူငယျခငျြးတှအေပျေါမှာလညျးလှမျးမိုးတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။